Caqli-qaadashada: Ku-xirayaasha WordPress waxaad u baahan tahay markaad abuureyso Waxyaabo Wanaagsan
Wordpress waa websaytka caadiga ah ee isticmaalka adduunka. Wordpress waxay martigelisaa in ka badan rubuc ka mid ah goobta adduunka. Isticmaalayaasha WordPress, waxaa jira in ka badan 44,000 plugins kala duwan oo aad ku rakibi karto. Website-yada Wordpress waxay leeyihiin waxtarka sare sababtoo ah nidaamka maareynta maadooyinka kala duwan ee ay isticmaalaan. Ganacsiyada kala duwan ayaa ogaaday fikradda ah inay kor u qaadayaan iibintooda goobaha iyo hawlaha eCommerce ee guuleysta.
Ross Barber, oo ah takhasus sare oo ka soo jeeda 10 Semalt , wuxuu hubinayaa in hababka cusub ee ee suuq-geynta suuqa , abuuritaanka naqshaduhu waa xeelad cusub oo dadku u isticmaalaan inay qiimo qiimo leh ku yeeshaan boogyadooda iyo shabakada - the best home network setup.
Abuuritaanka qoraaga waa waji lagama maarmaanka ah maamulaha shabakada. Inta badan qeybaha shabakada WordPress waxaa lagu maamuli karaa iyada oo loo marayo isticmaalka plugins iyo dashboard. Si kastaba ha ahaatee, abuuritaanka content waa dhinac kale oo u baahan talaabo gaar ah. Google ayaa ku dhawaaqday in tixgelinta ku haboon ay tahay arrin muhiim ah oo ka caawiya websaydhka darajada ayada sababo gaar ah. Dhererka iyo tayada qoraallada ayaa ah dhinac ka mid ah abuurista bogga. Waxaa lagama maarmaan ah in la horumariyo content of killer kuwaas oo soo dedejin kara geeddi-socodka darajo aad website. Waxaa jira dhowr plug oo WordPress ah oo aad isticmaali karto si aad u abuurto content killer. Dhamaadka dhammaadka, waa inaad awood u yeelatid inaad ogaato nooca WordPress ee ugu fiican ku habboon baahidaada internetka.
Tusaalahan waxay kaa caawineysaa inaad tiriso erayada iyo cufnaanta muhiimka ah. Waxay sidoo kale kaa caawineysaa in la qiimeeyo falanqaynta akhriska ee boggaaga. Xaqiiqo Xogta Stats ayaa u oggolaanaya dadka ku shaqeeya blogyada iyo shabakadaha internetka ee eCommerce inay sameeyaan luuqada falanqaynta luuqada, arrin taas oo go'aamisa qodobada kuhaboon ee maqaalkaaga. Waxaad kordhi kartaa darajadaada ee bogga ee SERPs iyagoo isticmaalaya qalabkan. Qalabkaan robot wuxuu hayaa macluumaad sida matxafka garaafka jawaab celinta bishiiba, mowduucyada la jebiyey iyo sidoo kale kuwa ugu sarreeya 20 ee ereyada muhiimka ah. Dad badan ayaa ka faa'iideysta kor u qaadista awoodda ay isticmaalaan erayada erayada ee ku jira nihoogkooda.
Qalabkani waa Mashiinka Raadinta (Optimization Search Engine) (SEO). Waxay ka caawisaa fulinta hawlaha sida hubinta waxyaabo kakooban, hubinta qishka iyo sidoo kale raadinta xiriiro jaban. Kuwa websaydhka ah waxay isticmaalaan qalabkan si loo barbardhigo cufnaanta calaamadaha muhiimka ah iyo sidoo kale dhinacyada wax soo-saarka ee noocyada kala duwan ee content. Waxaa jira xul ikhtiyaari ah oo lagu hubin karo qoraallada meta ee bogga internetka. Markaad bilowdo inaad sameyso boggaaga WordPress, waa cadahay in fiilada ama kor u qaadidu aysan kaa caawin karin inaad horumariso. Fikradda SEO ee PrePost waxay kaa caawin kartaa inaad ku nuuxnuuxsato tayada content ee aad sameysey boostadaada internetka ee la xidhiidha dhegeystayaashaada. Intaas waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale awood u yeelan kartaa inaad ogaatid xiriirinta jebinta ee waxqabadka bogaggaaga
Kaalintani waa maamulaha guud ee posts post. Waxaa macquul ah in dadku ay arkaan dhammaan jagooyinkooda iyo sidoo kale inay ku jiidaan aagaggooda. Marka aad abuurayso bogga internetka, waxaad ka heleysaa wax ka badan hal qof oo laga yaabo in ay iloobaan in ay meel dhigaan plugin si ay u maamulaan dheriyada blogga. Jadwalka Tifaftirka wuxuu kaa caawin karaa inaad sii wadato sii wadida waxyaabaha cusub ee akhristayaashaada. Xirfadahan waxay jiideysaa oo ay hoos u dhigtaa sifooyinka kaa caawin kara inaad gasho xayawaan kasta, u fiiri dhamaan fariimaha iyo sidoo kale maareynta posts ee qorayaasha kale.